musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Italy Kuputsa Nhau » Alitalia ndege: Yakavharwa kubhizinesi
Airlines • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hospitality Industry • Italy Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Akasiyana Nhau
Kutanga kubva pakati pehusiku, Nyamavhuvhu 24, 2021, ndege yendege yeAlitalia haichazotengesa matikiti endege ari kuitika kubva Gumiguru 15. Iyo ndege inotumira maemail kune vatengi vayo vakatenga ndege kubva muna Gumiguru 15, 2021, kuenda kumberi.
Ndedzipi sarudzo dzevatengi ava uye chii chinoitika kumatikiti avo avakabhadhara kare?
Vatengi vachapihwa sarudzo yekutsiva kwavo ndege (s) neimwe yakaenzana inotungamirwa nekambani yeAlitalia naGumiguru 14, 2021.
Izvo zvakare zvichave zvichiita kuti vatengi vagamuchire kuzere kudzoreredza avo matikiti (s).
Mushure mekuwana rezinesi rekushandisa uye chitupa cheanoshanda kubva kuEnAC, iyo Italian Civil Aviation Authority muna Nyamavhuvhu 18, ITA ndege (Italia Trasporto Aereo), yaimbozivikanwa se Alitalia, yakagadzirirwa kubviswa zviri pamutemo. ITA ichavhura kutengesa matikiti kutanga muna Nyamavhuvhu 26.
Kusunga chinopihwa chakaringana kune Alitalia ndege nhumbi
ITA Board, iyo yakasangana pasi pesachigaro waAlfredo Altavilla, yakafunga kushandura chisungo chisina kusunga chakatotumirwa muna Nyamavhuvhu 16 kuExtraordinary Administration yeAlitalia kuti isunge. Chipo ichi chinosanganisira makumi mashanu neshanu dzendege, inoenderana nhamba yematope, pamwe nezvibvumirano uye midziyo kubva kubazi reAviation kutanga kushanda muna Gumiguru.
Ndiani achange achicherekedza vatengi?
Anoshanda weiyo nyowani yeITA vatengi nzvimbo ichave yeCovisian iyo inoshandisa matekinoroji egore mukubatana pamwe nevadyidzani vakaita seSalesforce neAmazon Web.
Uye zvakare, kubva muna Nyamavhuvhu 26, saiti yekuunganidzwa kwezvikumbiro kubva kune vanhu vanofarira kushanda neITA ichave ichishanda. Izvi zvichateverwa nemusangano nemasangano evashandi kuti utange kutaurirana nezvechibvumirano chitsva chebasa.
ITA kuongorora vashandi vezvino mabasa
ITA ichatanga mashandiro ayo nevashandi mazana maviri nemazana masere. Inogona kuverengerwa mukutaurirana kwakatumirwa nekambani kumasangano evashandi tichitarisa kutanga kwekukonana. Vashandi "pakutanga zvakakodzera kutanga kwezviitiko" "zvakaenzana, sekureva kweBusiness Plan, kune vashandi mazana maviri nemazana masere" yakatsanangura ITA, iyo inoti "inowanikwa" kuumba vashandi "ichiongorora chero vanotsvaga basa vanopihwa nevashandi vazvino veAlitalia Sai. ”
Bhizinesi Rezvebhizinesi rinopa kuti kambani inogona "kuwedzera vashandi vekutanga" kudzamara yasvika panhamba yepamusoro yevashandi vanosvika zviuru mazana mashanu nemazana manomwe nemakumi mashanu muna5,750. Zvichakadaro, ITA yakazivisa kuti vashandi vese vachakumbirwa kuwana anti-COVID Green Kupfuura.
Kuzivikanwa kweanoona ndege mutengesi
ITA yakadzokorora chisarudzo chayo chekuita kuti ngarava dzayo dzive dzakaenzana pamusoro pechirongwa cheindasitiri uye, kusvika pari zvino, kutanga chirongwa chekumutsiridza ngarava dzinotangisa nekukurumidza sezvazvinogona, kuchitsiva nechizvarwa chitsva chenyanzvi dzinoshanda uye nharaunda. .
Sarudzo yekuumbwa kwezvikepe zvenguva yemberi ichatorwa uye ichaziviswa munaGunyana. ITA iri kuvhurawo chirongwa chitsva chekuvimbika "kumberi muhunhu hwemasevhisi anopiwa mutengi, zvinogona kusanganisirwa neavo vevamwe vanobatirana navo mumaindasitiri" zvichipiwa kuti mitemo yeEuropean inodzivirira kambani nyowani kuti isakwikwidze kutsvaga kweAlitalia MilleMiglia chirongwa.